Train Travel France Archives | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောချိုင့်ဝှမ်း, ကြီးမားသောချောက်အမြင်များ, ကမ်းခြေ, သို့မဟုတ်ချစ်စရာကောင်းမြို့များ, ဥရောပသည်မိသားစုစခန်းချနေထိုင်ရန်အတွက်အံ့ဖွယ်နေရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်. အဆိုပါ 10 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချနေရာများသည်နွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, ဆောင်းတွင်းပင်. သူတို့အားလုံးလှပသောရှုခင်းများနှင့်သဘာဝတရားဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်, နှင့်အများဆုံး…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သီချင်းဆိုငှက်များကိုနှိုးထ, သင့်ရဲ့အိမ်တံခါးကနေရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များနှင့်အတူ, ဇိမ်ခံ yurt သို့မဟုတ် treehouse ၌တည်၏. ဥရောပရှိအလှဆုံးနေရာများတွင် ၀ မ်းနည်းခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ကြီးမားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. လာမည့်7ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပြောင်မြောက်သောနေရာများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိစေသည့်အရာများဖြစ်သည်…
ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ အလှဆုံးသဘာဝတရားဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်, အချိန်အားဖြင့်နဂိုအတိုင်း, များမှာ 10 ကမ္ဘာလှည့်လည်ရန်အလှဆုံးရှေးဟောင်းမြို့များ၏. တရုတ်နိုင်ငံ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှေးဟောင်းမြို့များမှဥရောပတစ်လွှား, ဒီခရီးစဉ်ဟာအလယ်ခေတ်ကနေကျွန်ုပ်တို့ခေတ်အထိပုံပြင်တွေနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်. မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အများဆုံးဖြစ်သည်…
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ သင်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခရီးသွားနိုင်သည်, သင်မူကားအစားအစာမှတဆင့်နေရာတိုင်း၏အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်. ငါတို့ 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကောင်းဆုံးစားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်များကသင့်အားလူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မည်, ယဉျကြေးမှု, သမိုင်း, နှင့်မည်သို့ရောနှောနေခြင်း, တိုင်းကိုက်အတူ…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ တစ်ဖက်တွင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်အခြားတစ်ဖက်ရှိအလှပဆုံးမြို့များနှင့်အတူ, အဆိုပါ 10 ဥရောပရှိလှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့များသည် အနားယူ၍ မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်သည်. ကမ်းပါးပေါ်တွင်အနားယူ, သမုဒ္ဒရာလှိုင်းတံပိုးကိုနားထောင်, အတွက်တက်စိမ်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးမိသားစုအားလပ်ရက်များထဲမှတစ်ခုမှာဥရောပရှိအကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများထဲမှစိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ပြင်သစ်မှာသာ, သငျသညျရှိသည်လိမ့်မယ်3အံ့သြဖွယ်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများ, ငါတို့လက်ကိုရွေးလိုက်တယ် 10 သင်၏နောက်များအတွက်ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများ…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ရတာဟာ, ခမ်းနား, စိတ် - မှုတ်, ဖော်ပြရန်စကားလုံးအလုံအလောက်မရှိပါ7ဥရောပရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအားကစားကွင်း. ထို့အပြင်, သင်ထင်လျှင်ပင်သူတို့၏ကြီးမြတ်မှုကိုသဘောပေါက်နိုင်သည်, ၀ င်ရောက်မှသာ, မင်းကမှော်သဘောကိုတကယ်နားလည်တယ်ဆိုတာပဲ. ဒါကြောင့်, မင်းဆိုရင်…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ရထားကိုမြို့နားသို့သွားရန်သို့မဟုတ်စျေးဝယ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာသို့သွားပါ, ဥရောပရှိအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်မြို့တော်ကအားလုံးကိုရှိသည်. ခွေးလှေးစျေးကွက်ရှိရာ retro နှင့်ခေတ်သစ်ဖြစ်ကြသည်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်သမိုင်း, အတူတူလာကြ, ကြီးစွာသောအရာတို့ကိုပေါ်ထွန်းဘယ်မှာ, နှင့်ငါတို့7ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးကွက်…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ဥရောပမှာအံ့ wonderful စရာကောင်းတဲ့အထင်ကရနေရာများစွာရှိတယ်. တိုင်းထောင့်နောက်ကွယ်မှ, သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ရှိတယ်. စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်ထူးခြားသည့်မြင်ကွင်းများအနက်တစ်ခုမှာခမ်းနားသောစမ်းရေတွင်းဖြစ်သည်, ငါတို့လက်ရွေးပြီ 10 ဥရောပ၌အလှဆုံးစမ်းရေတွင်း၏. ဂီတ,…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ...
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ကလေးများနှင့်ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်းသည်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. ဒါကြောင့်, ကလေးတွေပျော်မွေ့မည့်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်, တစ် ဦး မှတစ် ဦး အလည်အပတ်ကဲ့သို့ 10 ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ. ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံအချို့ရှိသည်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ...